Iyo Nyowani ABC's yekutengesa: Gara Uchibatanidza | Martech Zone
Iyo Nyowani ABC's yekutengesa: Gara Uchibatanidza
Muvhuro, June 6, 2016 Douglas Karr
Zvitina uye dhaka zvitoro zvekutengesa zvichiri kuendesa yakawanda yekutenga simba kuzvitoro zvavo - uye hazvizove kuenda chero nguva munguva pfupi. Asi maitiro ari kuchinja, achida kuti mukati yekutengesa nzira mukati mezvitoro kuvaka hukama hwakanaka uye zviitiko nevatengi vavo kuti vaone kuti vanoramba vachidzoka.
Iyi infographic kubva kuDirectBuy ndeyekutarisa kuri pachena pamatambudziko avo, maitiro evatengi ari kuchinja, uye marongero matsva avari kutumira. Zvichida chandinofarira iABC yavo itsva… hazvisi Gara Uchivhara, ndizvo Gara Uchibatanidza!
Yakaomarara yepakati yekutengesa matekiniki ari kudonha parutivi penzira mukufarira kwevamwe vashandisi-vane hushamwari, masevhisi-anotungamirwa kudyidzana. Tiri kuisa mari mune yakasarudzika yemabhenefiti kuitira kuti nhengo dziwane mitengo yakanakisa uye masevhisi vasina kumbobva pamba. DirectBuy
Kutenga pamhepo hakungopi nyore, kunopa imwe toni yemamwe mabhenefiti:
Chitoro Maawa - Vatengi vanogona kutenga chero pavanoda online.
Mutambo Wemakwikwi - Makwikwi paInternet anoderedza mitengo pakati pevanokwikwidza.
havukavu - Hapana chekumirira mumitsetse… kutenga pamhepo kunokurumidza.
Zvipiriso - Kuwanika, zvakasiyana uye kuenzanisa zvese zviri pamusoro pamhepo.
Vanhu vachiri kushopira muchitoro nezvikonzero zvakawanda… kuona nekubata chigadzirwa, kunyaradzwa kwechitoro, kuonga kwevashandi, uye nenyaya yekuti vanogona kudzorera zvinhu zviri nyore. Kufananidza zviri nyore zvepamhepo neruzivo rwakakura mu-chitoro kunovandudza kugona kwevatengesi kuti vawane traffic yakawanda mu-chitoro uchityaira vashanduri pamhepo zvakare.
Iwe haugone kuenzanisa ruzivo rwevatengi mune yekutaura kana kufona neye mu-munhu mukana. Kuvaka hukama kunofanira kuve pekutanga pazvidhinha zvese nedhaka.
Tags: gara uchibatanidzawevarandamutungamiri wechizvarwamobile shoppingonline shoppingchitororuzivo rwekutengachitoro ruzivo
Jul 12, 2016 na10: 57 PM
Kutenda neruzivo. Mukuita kwangu ndakataura, iyo yakanaka mhinduro kana peji rakanaka pa facebook, inogona kusundidzira vanhu kuti vatenge smth. Asi zano rakaipisisa ndere kuteerera SMM kana ecommerce haina hanya neSEO.